नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : नेपालमा पनि भुकम्पको धक्का तर जन धन को कुनै क्षति भएको आधिकारिक जानकारी आएको छैन !
नेपालमा पनि भुकम्पको धक्का तर जन धन को कुनै क्षति भएको आधिकारिक जानकारी आएको छैन !
चीनको सीमावर्ति क्षेत्रमा गएको भूकम्पको धक्का सोमबार साँझ काठमाडौं सहितका देशका विभिन्न स्थानमा महशुस भएको छ । अमेरिकी भूगर्भ विभागका अनुसार काठमाडौंबाट १ सय १६ किलोमिटर उत्तर पूर्वी चीनको चोङदुई नजिकैको सीमावर्ति क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दु बनाएर ४ दशमलव ६ रिक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ । काभ्रेको बनेपा पनौतिमा समेत भूकम्पको धक्का सहशुस भएको छ । भूकम्पबाट कुनै क्षति भएको समाचार छैन ।